Wararka Maanta: Jimco, May 25, 2012-Ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM oo la wareegay Afgooye
Afhayeenka ciidamada AMISOM Lt-Col Paddy Ankunda oo la hadlay BBC-da ayaa xaqiijiyay in magaaladu gacantooda gashay.
Waxaana uu sheegay in xarakada Alshabaab uu jab wayni gaaray.
"Kaama soo waaqsan doonaan jabka gaaray" ayuu yiri Ankunda.
Alshabaab ayaa isaga baxay magaaladaasi, kadib markii weerar culus ay ku soo qaadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada Soomaaliya oo sheegay inay dileen qaar kamid saraakiisha sare ee Alshabaab, sida lagu soo bandhigay sawirro ay warbaahintu heshay.
Magaalada Afgooye oo 30km uu jirta Muqdisho ayaa ah mid kamid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee xarakada Alshabab ay gacanta ku haysay, taasoo isku xirta Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka, una fududayn jirtay Alshabaab inay si sahlan weeraro uga gaystaan Muqdisho, xataa markii ay isaga baxeen caasimada.